इन्धनको मूल्य बढेपछि हवाई भाडा बढ्यो, हेर्नुहोस् कुन ठाउँको कति बढ्यो ? « Etajakhabar
इन्धनको मूल्य बढेपछि हवाई भाडा बढ्यो, हेर्नुहोस् कुन ठाउँको कति बढ्यो ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य बढाएसँगै हवाइ सेवाप्रदायक कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका छन् । वायुसेवा सञ्चालकको छाता सङ्गठन वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले बढेको इन्धनको मूल्यअनुसार भाडा वृद्धि गरेको जनाएको छ ।
हवाई इन्धनमा सरकारले आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ मूल्य बढाएर १०१ रुपैयाँ पुर्याएको छ । अब यात्रुले हवाई यात्राका क्रममा अधिकतम २२० रुपैयाँसम्म बढी मूल्य तिर्नुपर्नेछ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट समेत परिमार्जित मूल्यलाई स्वीकृति प्रदान भएसँगै आइतबारबाट यो भाडादर कायम भएको हो । परिमार्जित फ्यूल ‘सरचार्ज’ अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौं-धनगढी रुटमा २२० रुपैयाँले बढेको छ । यस्तै काठमाडौंबाट हुने पर्वतीय उडानमा रु १७० रुपैयाँ बढेको छ भने पोखरा-विराटनगर रुटमा रु १८० रुपैयाँ बढेको छ ।
काठमाडौंबाट जुम्ला उडानमा भने १७० रुपैयाँ बढेको छ । काठमाडौं-जुम्ला उडानमा भने १७०, काठमाडौं-सुर्खेत १७५, काठमाडौं-नेपालगन्ज १६०, काठमाडौंबाट भद्रपुर १५० रुपैयाँ भाडा बढेको वायुसेवा संचालक संघले जनाएको छ ।